Yuusuf Dabageed “Qarixii shalay waxaa soo maleegay kooxihii dhagar qabayaasha ahaa, ciidamada ayaana fashiliyay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar “Dabageed” oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in qarax shalay ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaradaha ee beledweyne ay fashiliyeen Ciidamada Amniga, isagoo sheegay in qaraxaasi uusan geysan dhibaato aad u weyn, marka laga reebo dhaawacyo kooban.
“Qaraxaas waxaa soo maleegay kooxihii dhagar qabayaasha ahaa Alle ayaa fashiliyay, ciidamada amnigana waa ka hortageen, shan qof ayaa ku dhaawacantay wax kale oo dhibaato ah ma jiro”ayuu yiri Yuusuf Dabageed.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Illaa shan qof oo uu ka mid yahay ninkii Computer qarxay soo saaray baabuurka shirkadda diyaaradaha rakaabka ku qaadeysay ayaa la qabtay, waxaana wali socda baaritaan”ayuu mar kale yiri Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar.
Dabageed ayaa tilmaamay falkaasi uusan saameyn ku yeelan doonin duulimaadka garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif iyo howlihiisa, isagoo carrabka ku adkeeyay in la xoojin doona ammaanka garoonka.
Saraakiisha Ammaanka ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli la baarayay boorsooyin iyo alaabo ay wateen dadkii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha Beledweyn, waxaana la rumeysan yahay in qaraxa Laptop ku jiray lala rabay in lala raaco diyaarad ku sugneyd garoonka oo rakaabka u qaadi laheyd Muqdisho.
Tagged A Trigana Air ATR-42 plane, baledweyne, hiiraan, qarax labtop